Ads အတွက်အခမဲ့ Banner Maker | နဖူးစည်းစာတန်းဖန်ဆင်းရှင်
Banner Creator: စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ads ကိုထုတ်လုပ်ပါ
တဦးတည်းကလစ်၌သင်တို့၏ display ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတှကျအ optimized အဆင်သင့်-to-အသုံးပြုမှုကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေအထုပ် Generate ။
အခမဲ့လိမ္မာပါးနပ်ကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်စမ်းကြည့်ပါ!
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း နဖူးစည်းစာတမ်းကို အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသည်
အဆိုပါ Banner ဖန်ဆင်းရှင် tool ကိုသင်၌ဒိုမိန်း Enter နှင့်သင့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပါ။ စာသားများ, ရုပ်ပုံများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်သည်။
သို့မဟုတ် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းပလိတ် များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
ဘယ်နေရာမှာမဆို။ ဆို device ကိုမှအ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Banner ဖန်ဆင်းရှင်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်နည်းတူအစွမ်းထက်သည်။ နေရာတိုင်းမှာနှင့်အခါတိုင်းသင်လိုချင်တာသင့်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ Edit ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖူးစည်းစာတန်းဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အတူကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံအတွက်သင်၏ Google Ads လှုပ်ရှားမှုများမှအသစ်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ Upload လုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ site ကိုအချိန်မရွေးမှ traffic ကိုဆွဲဆောင်စတင်ပါ။ ခလုတ်ထိပုတ်ပါနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုကို Google Ads လှုပ်ရှားမှုများရန်သင့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေအထုပ် upload ။
ယခုလိမ္မာပါးနပ်ကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်ကြိုးစားပါ
ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ချင်းသင်၏ Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတှကျအ optimized နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုဖန်တီးပါ။
လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်အကြောင်းကိုပိုမို
လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အတူ Google ကပြရန်ကြော်ငြာတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်ရန်နှင့်သင့်အွန်လိုင်းစတိုး၏စွမ်းဆောင်မှုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပိုပြီးလေ့လာပါ။ ကောင်းသော Google ကကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ, ရှိသမျှအထက်ပိုမိုရောင်းအားသငျသညျအကြီးအ data တွေကိုဆောင်ကြဉ်းနှင့်နိုငျပါသညျ!
နဖူးစည်းစာတန်းဖန်ဆင်းရှင် features တွေ, အကြိုးခံစားခှငျ့ & အားသာချက်များ
လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အတူ build အသိအမြင်အသစ်များဆောင် generate နှင့် drive ကို (နှင့်တိုး) အရောင်း ... အားလုံးလုံးဝအခမဲ့!
သငျသညျကို manually သင့်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်အလိုအလျှောက်သူတို့ကို generate ချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, လိမ္မာပါးနပ်ကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်မပါကုန်ကျစရိတ်မှာသင်ကူညီနှင့်သင့်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရည်အသွေးသည်နဖူးစည်းစာတန်းအထုပ်ကိုဖန်တီးရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ သုညကုန်ကျစရိတ်မှာ ... Google ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့တစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကို Google Partner ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာသင့်ရဲ့ Display ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်သင့်အွန်လိုင်းစတိုးအဘို့အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ,
သင်က Banner ကြော်ငြာလက်စွဲစာအုပ်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုရွေးချယ်ပါခဲ့လျှင် ...
သင်၏ Google Display ကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏ဖန်တီးမှုအပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်နှင့်မာအလုပျကိုကျော်သွားစေချင်သလား? သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံး, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်များနှင့်လိုဂို upload သင့်ရဲ့ကြော်ငြာစာသားအတွက်ဖန်တီးအရေးယူမှုမှဖုန်းခေါ်ရှေးခယျြဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုကစွန့်ခွာ! သငျသညျတက်ကြွစွာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, သင်တည်ဆောက်ပုံများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီရပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကိုပုံဖော်နှင့် sizing ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အနဖူးစည်းစာတမ်းတွေနေဆဲ Google ကကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှလုံးဝဥစ္စာပေမယ့်အများဆုံး boring အစိတ်အပိုင်းအတွက်အကူအညီနဲ့တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ optimization နဲ့အပ်လုဒ်တင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်သင့်ရဲ့အနှစ်သာရနှင့်အတူ!
သင်က Banner ကြော်ငြာအလိုအလျောက်မျိုးဆက်ကျောင်းသားဦးစားပေးလိုလျှင် ...
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကိုယ်တိုင်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်အချိန်မရှိဘူး, အကယ်. , ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့အဘို့ရှိသမျှကိုအလုပ်ကြကုန်အံ့။ ကြော်ငြာစာသားများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်, ရုပ်ပုံများ၏ရွေးချယ်မှု, အနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏ဒီဇိုင်းကို ... ဒါပေါ်မကျင့်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်သင့်ရဲ့ website မှာ URL ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ Google က Display ကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်အထိရောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတက်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူမဖြစ်နိုင်! သငျသညျလိုလျှင်သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း့ URL ကိုအတူငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေထုတ်ဝေ, အောင် configuring, အကောင်းဆုံးနှင့်ဂရုစိုက်။
Key ကိုတှေ့မညျ Features ...
လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်၏အများစုမှာထဲက Get ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးစူပါလွယ်ကူသည်, ငါတို့ကတိ။ ကျနော်တို့မတိုင်မှီကဆိုပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့သည်ပြုပါရန်ရှိသည်အားလုံး, ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာတွေကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်သင်၏အ amp နှင့် HTML5 ကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေအောင်မြင်ဖို့သင်၏ Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတှကျ web ပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြံပြုနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးအရွယ်အစားအတွက်လျင်မြန်စွာတည်ဆောက်ထားလိမ့်မည်။
လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသင်ကျမ်း မှစ. , ပုံရိပ်တွေဖို့နဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာများ၏အရောင်များမှအရာအားလုံးစိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြု, တစ်ခုခုကိုအော်တိုသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ် mode မှာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML5 ကိုနဖူးစည်းစာတန်းဖန်ဆင်းရှင်မှတဆင့်သင်အမြဲသင်တို့ကိုကြည့်ရန်သင့်နဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာတွေချင်သလဲဆိုတာပေါ်မှာနောက်ဆုံးပြော, သင်တန်း, ဘာမျှမသင့်ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတင်ပါလိမ့်မည်ရှိသည်ဟုပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်ကြော်ငြာအုပ်စုများမှအပ်လုဒ်တင်ပြီးနှင့်ရွေးချယ်ထားလှုပ်ရှားမှုများတက်ကြွလျှင်သူတို့ချက်ချင်းအပြေးစတင်မည်ရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်ပါ။ ထက်ပိုမိုလွယ်ကူ!
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဆိုပါတယ်သကဲ့သို့သငျ, သင့်လှုပ်ရှားမှုများရန်သင့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ upload တင်ချင်ကြဘူးလျှင်စိုးရိမ်ပူပန်, ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူးင်ဘူးကသင့်ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲအမှုကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်လမ်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခါတိုင်းသင်လိုချင်သောနေစဉ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်သူတို့ကို upload တင်နိုင်အောင်ကိုလည်းသင်ကသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများကကြိုးစားရန်အဘို့အသငျသညျအဘယျသို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် ... အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်?
အဘယ်ကြောင့်လိမ္မာပါးနပ်ကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်?
လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်သင့် Google Ads Display ကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ generate ကိုကူညီခြင်းနှင့်အခမဲ့အဘို့သင့်အကောင့်မှသူတို့ကို upload တင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ Display ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးပြောင်းလဲနေသောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေရပါလိမ့်မယ်, သင်သည်အသုံးပြုသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, amp (မိုဘိုင်းအတွက်အထူးဒီဇိုင်း) နှင့် HTML5 ကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေရှိခြင်းသင်ပိုကောင်း CTR နည်း (Clickthrough မှုနှုန်း) နှင့်ခြုံငုံရလဒ်များကိုခံယူကူညီပေးသည်။ သငျသညျအရှိဆုံးသင်၏ Google ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်ထဲကအဖြစ်သင်၏အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များအရခွင့်ပြု။
ကောင်းသော Google ကကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဘို့ဖန်တီးမှုနှင့်ဖျော်ဖြေနဖူးစည်းစာတမ်းတွေတည်ဆောက်ခြင်းအချိန်, အရင်းအမြစ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာသင်မဟုတ်ရင်ဒီဇိုင်း, ကြော်ငြာမိတ္တူရေးသားခြင်းသုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်၏နာရီကိုကယ်တင်နှင့် mockups တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှု element တွေကိုအတူတက်လာမယ့်ကူညီပေးသည်။ ဤအအရင်းအမြစ်များနှင့် Display ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန် Save ကိုဒီ tool နဲ့သူတို့ကိုရှိသည် ... တစ်ကလစ်ခုနှစ်တွင်! အချိန်ကငွေဖြစ်ပါသည်, သင်သည်ထိုသူတို့ထိန်းချုပ်ထားရန်လိုလျှင်သင်ရွေးချယ်ဖြစ်သကဲ့သို့, လက်စွဲစာအုပ်ဆောက်လုပ်ရေး option ကိုရွေးနဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုသို့မဟုတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဖြုန်းရပ်နား! ငါတို့သည်သင်တို့အပြေးအလွှားနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘဲသင်၏နံနက်ကော်ဖီသောက်ခံစားရန်အချိန်ရှိသည်ချင်, အချိန်ပိုက်ဆံပါ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Google ကကြော်ငြာ Automation Software များသငျသညျရိုးရိုးကထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင့် site ကိုမှ traffic ကိုကားမောင်းစတင်ရန်ထိုသို့ချက်ချင်းအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, သင်ကနောင်တမရကြလိမ့်မည်, ဆိုကြာကြာစောင့်ဆိုင်းကမကြိုးစားပါ!
သင်၏ Google Banner ကြော်ငြာပယ်ချရှိခြင်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့! လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာသေချာသင်ဒီဇိုင်းနှင့် sizing နှစ်ဦးစလုံးနဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာနှင့် ပတ်သက်. Google ကကြော်ငြာလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာစေသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးက Google ပရီးမီးယားလိဂ် Partner အဖြစ် google ကြော်ငြာတွေစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ကိုအပ်လုဒ်တင်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကိုသူတို့ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ် display ကိုရှိမရှိ, Google ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာရှိသည်။ ယုံကြည်ကိုးစားပါကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများ Google ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း, ကောင်းစွာသွားပါလိမ့်မယ်။
Google ကကြော်ငြာ Display ကိုကမ်ပိန်းများ
display ကြော်ငြာကြော်ငြာဆင်းသက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏ပုံစံကိုပြသသည့်အတွက်အွန်လိုင်းကြော်ငြာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးပုံစံများတွင်ဤနဖူးစည်းစာတမ်းတွေပုံရိပ်တွေနှင့်စာသားပေါင်းစပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစအသံ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အခြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို formats ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
Google က Display ကိုကြော်ငြာပြနေဘယ်မှာလဲ
ကြော်ငြာတွေကို Google Search ကိုအတွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအထက်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကမြေပုံ app အပါအဝင်စျေးဝယ် tab ကိုပေါ်နှင့် Google Maps ပေါ်မှာ, ဘက်ခြမ်းမှာ, Google Play တွင်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအထက်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် .... သင်ဤအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်သွားပါသလား?
ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာပြရန်ကွန်ယက်၏အဓိကအားသာချက်တချို့ရှိနေပါတယ်: ကတိုင်းတာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အကြီးအ segment ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို customize ခွင့်ပြုပါကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး remarketing များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အဆက်အစပ်ဖြစ်ပါသည်, သူက ကမ်းလှမ်းမှုမိုဘိုင်းနှင့်အတူကောင်းသော Synergy ။ ထို option ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google ကကြော်ငြာ Banner ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အတူအခမဲ့အလွယ်တကူများအတွက် Google Ads Display ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လက်လွတ်မနေပါနဲ့။ ဒါဟာရွှေရောင်အခွင့်အလမ်းပါ! ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖူးစည်းစာတန်းဖန်ဆင်းရှင်စမ်းကြည့်ပါ!
သင်ဖန်တီးသောနဖူးစည်းစာတန်းများကိုသင်၏ Google Ads အကောင့်သို့တိုက်ရိုက် upload တင်၍ ရလဒ်များကိုချက်ချင်းရရှိနိုင်ရန်သင်၏ Google Ads အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေတာ privacy ကိုအလေးအနက်ထားပြီးအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုသင့်အားပေးအပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။